वैकल्पिक सिकाइमा अभिभावकको भूमिका | Ratopati
personराजदेव यादव exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ३१, २०७७ chat_bubble_outline0
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठनमा जान समस्या भएको छ । यो अवस्था सहज नभएसम्म आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रयास विभिन्न विद्यालयहरुले गर्दै पनि आएका छन् । विद्यालयको यो प्रयास सँगसँगै अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षामा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालमा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको जग बसाल्न वि.सं. २०१४ सालदेखि प्रारम्भ भएको प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम र वि.स. २०३५ मा स्थापित रेडियो शिक्षक तालिम आयोजनाले सहयोग गरेको देखिन्छ । योभन्दा अघि २००८ सालमा नन्दी रात्रि माध्यमिक विद्यायबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको बिजारोपण गरेको भए पनि यस कार्यक्रमको विस्तार पछिल्लो समयमा वि.सं २०६४ बाट परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरेको खुल्ला विद्यालय कार्यक्रमसँगै भएको देखिन्छ । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०६३ सालमा विद्यालय तहमा खुला शिक्षा प्रदान गर्न दूर शिक्षा तथा खुल्ला सिकाइ नीति एवं निर्देशिका तयार गरियो । मागमा आधारित मुलुकका सबै जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय रहने गरी खुल्ला विद्यालयको सम्बन्धन दिई अध्यापन कार्यको थालनी भयो । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७७।२।१८ को निर्णयअनुसार स्वीकृत वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ हाल कार्यान्यनको रूपमा छन् ।
नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४÷५९) ले दूर शिक्षामार्फत विद्यालय र विश्व विद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्न खुल्ला विद्यालय र खुल्ला विश्व विद्यालयको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले पनि दूर शिक्षा तथा खुल्ला सिकाइमार्फत विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना (२००१–१५) मा आजीवन सिकाइको अभिवृद्धिका निम्ति खुल्ला सिकाइको अवसरहरुको सिर्जना गर्ने प्रावधान भयो ।
दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–६४०) मा दूर शिक्षामार्फत विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भयो ।
खुल्ला शिक्षा तथा दूर सिकाइ नीति (२०६३) ले चाहना भएका सिकारुहरुका लागि शिक्षामा पहुँचको विस्तार गर्ने, परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, जीवनपर्यन्त, शिक्षा र पेसागत विकासको अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञान र सीपको प्रमाणीकरण गर्ने पद्धतिको स्थापना खुला विद्यालयमार्फत विद्यालय तहको समकक्षी शिक्षा उपलब्ध । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा आयो ।
सिकाइमा सहजीकरणमा अभिभावको भूमिका
आफ्ना बालबालिकालाई जीवन उपयोगी, परम्परागत तथा सामाजिक व्यवहार कुशल सीपहरु सिक्न र सिकाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
–आफ्ना बालबालिकाहरुको अध्ययन, अध्यापनमा निरन्तर सहयोग गर्ने ।
–समुदायमा सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्रिय रहने ।
–विद्यार्थीहरुको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तह र विद्यार्थीलाई विवरण उपलब्ध गराउने ।
रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, अडियो, भिडियो, अनलाइन कक्षाका लागि सिकाइ सामग्री व्यवस्था एवं प्रसारण केन्द्र र सम्पर्क केन्द्रहरु सबै पायक पर्ने ठाउँहरु स्थापना गर्न नसक्नु ।
–वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै संस्थागत सञ्चालन हुँदा समन्वय, साझेदारी र सहयोग कायम हुन नसक्नु ।
–सबै ठाउँमा पर्याप्त विद्युत् जस्तो आधारभूत पूर्वाधार सुविधा अझै पनि नहुनु ।
–वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पर्याप्त सूचना तथा सञ्चारमुखी बजेट नहुनु ।
–सबै सहजकर्ता, विद्यार्थी र अभिभावकहरु पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री हुन नसक्नु ।
–सबै अभिभावकहरु आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्नु ।
–समयको व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन नसक्नु ।
–सबै व्यक्तिहरु अझै पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नु ।
–वैकल्पिक शिक्षा मैत्री पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, निर्देशिका परिमार्जन अझै हुन नसक्नु ।
–प्रारम्भिक बाल कक्षामा निर्धारित सुरक्षा र स्वास्थ्यका मापदण्ड अनुरूप सरसफाइलाई ध्यान दिई खेल सामग्री, मनोरञ्जन सामग्री, अडियो भिडियो सामग्रीसहित आकर्षक, मनोरञ्जन र बालमैत्री पद्धतिमा जोड दिई घरायसी वातावरणमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुको क्षमता अनुसार वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
–वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने फरक फरक निकायबीच समन्वय गरी प्रमुख अधिकारिक निकायहरु, ऐन, नियममा स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
–वैकल्पिक शिक्षा छुट्टाछुट्टै स्थानबाट सञ्चालन हुनाले फरक व्यवस्थापनमा समन्वय र एकरूपता कायम गर्न नसकेकाले एकीकृत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
–सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा वैकल्पिक शिक्षाका लागि सिकाइ र अध्ययन केन्द्रहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सञ्चार मिडियाहरुसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग गरी वैकल्पिक शिक्षा प्रसारण केन्द्रहरु स्थापना गर्ने ।
–अडियो, भिडियो र टेलिभिजन रेडियो, एफ.एम. तथा सञ्चार क्षेत्रलाई बहुउपयोगी माध्यमा प्रयोग गर्ने ।
–वैकल्पिक शिक्षाका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
–नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र पृष्ठपोषण गर्नका लागि छुट्टै प्रविधिक जनशक्तिको रोस्टर सूची तयार गरी निरन्तर अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी पृष्ठपोषण दिनुपर्ने ।
वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली आजको नितान्त आवश्यकता हो । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय र समाजको मुख्य मागका रूपमा आएको हो । विश्वव्यापी रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविभिमुखी हुँदै गएको देखिन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा जम्मा गरेर शिक्षा प्रदान गर्नुभन्दा राम्रो प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी विद्यार्थीहरुको घरघरमा विद्यालयमय वातावरण सिर्जना गरी वैकल्पिक शिक्षा दिनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको लक्ष्य नियमित संरचनाका शिक्षण संस्थाहरुबाट मात्र सम्भव नभई वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमको जोड दिई विद्यार्थीहरुको आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।
लेखक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, धनुषाका शाखा अधिकृत हुन् ।